Siyaasiyiinta reer Waqooyi oo ku kulmaya Garowe – Idil News
Siyaasiyiinta reer Waqooyi oo ku kulmaya Garowe
Isu imaantinka Siyaasiinta, Aqoon yahanka, Madaxda & Ururada Bulshada ee ku kulanka Garowe,Caasimadda Puntland waxay muujinaysaa sida ay muhiim u tahay in salka loo dhigo siyaasadda kala firirsan ee Soomaaliya.
Arrinta ugu Muhiimsan waa ergada & Wax Garadka Reer Waqooyi oo kusoo qul-qulaya Garowe.
Dowladda PL & Shacabkeeda ayay uga Mahad cesheen isu keenida Siyaasiinta Reer Waqooyi ee Golayaasha Dowladda Federalka Somaliya ku wada jira, si loo xalliyo khilaafka & is fahandarada dhextaal, gaar ahaan Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdixaashi & Raysal Wasaare Ku xigeenka DFS Mahdi Guleed.
Waxgaradka Reer Waqooyi ee Garoowe soo gaaray waxay door wayn ku yeelan doonaan abaa-bulka howshaas, si ay u sahlanaato soo xulista Xildhibaanada Bulshada Reer Waqooyi, gaar ahaan Beesha Reer Shiikh Isxaaq.
Garowe waa meesha kaliya ee ergooyinka Reer Shiikh Isxaaq ku Kulmi karaan marka loo eego dhawanaanshaha.